Sabotsy 08 Mey 2021 – FJKM
Rehefa ny Fanahin’i Jehovah no mitoetra amin’ny olona …
Ity faminaniana ity dia milaza ny amin’ny hivoahan’ny mpanjaka iray izay hitondra fiadanana ho an’ny olona . Ny mampiavaka io mpanjaka io dia ny fitoeran’ny Fanahin’i Jehovah ao aminy ( and2) . mitondra soa ho an’ny rehetra ny olona , satria :
1-Hanjaka ny fahamarinana sy ny rariny (and 2-5)
Ny olona itoeran’ny Fanahin’Andriamanitra dia manana fahendrena , ny fahazavan-tsaina na fahaiza-manavaka ny tsara sy ny ratsy , ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana na fahaizana mamolavola sy manatanteraka , matahotra an’Andriamanitra (and2,3) , tsy manaiky ny tsy rariny sy ny tsy fahamarinana, manohitra ny fanaovana tsinontsinona ny mahantra , manafay ny olon-dratsy (and 4,5) . Olona toy izany no azo antoka fa hahatafavoaka ny firenena anatin’ny fahantrana lalina . Aoka isika Fiangonana tsy hitsahatra ny hangataka amin’ny Tompo mba hiasa amin’izay rehetra nomeny fahefana ny Fanahy Masina , hahaizany manao ny sitrapon’Andriamanitra .
2-Hiainana ny fiadanana (and 6-9)
Ny fanehoana ny fiaraha-monin’ny biby mpifandramatra , mbamin’ny biby masiaka sy ny zazakely ( and 6-8) dia mampiseho fa milamina sy mandry fahalemana ny mponina ny tany rehetra . tsy hita taratra intsony ny tahotra sy ny tebiteby isankarazany , miverina araka izay naharian’Andriamanitra azy ny fifandraisan’ny olona samy olona , ary koa ny fifandraisan’ny olona amin’ny zava-boahary . ity faminaniana ity dia mampiseho amintsika ny fampihavanana nentin’i Kristy ho antsika tamin’ny fahafatesany teo amin’ny hazo fijaliana izay mitondra ho amin’ny tena fiadanana sy fiainana mandrakizay . Hoy Jesoa: » ...Fiadanana no avelako ho anareo… »(Jao 14.27)
Inona no mampiavaka ny « olo-marina » sy ny « olona mahay » ?